सिर्जनशील शनिबार- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — साथी सदीक्षा शर्मा स्थानीय एफएम रेडियोमा ‘समता’ कार्यक्रम चलाउँछिन् । उनी बालबालिकाले प्रस्तुत गरेका विषयलाई रेडियोमार्फत सबैलाई सुनाउँछिन् । ‘साथीहरूले दु:ख गरी तयार पारेका प्रस्तुति अरूका लागि पनि उपयोगी हुन्छन्,’’’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले रेडियो कार्यक्रमबाट सबैसामु पुर्‍याइरहेका छौं । यसले अरू बालबालिकालाई पनि उत्साही बनाइरहेको छ ।’’ ।
साथी सदीक्षा शर्मा स्थानीय एफएम रेडियोमा ‘समता’ कार्यक्रम चलाउँछिन् । उनी बालबालिकाले प्रस्तुत गरेका विषयलाई रेडियोमार्फत सबैलाई सुनाउँछिन् । ‘साथीहरूले दु:ख गरी तयार पारेका प्रस्तुति अरूका लागि पनि उपयोगी हुन्छन्,’’’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले रेडियो कार्यक्रमबाट सबैसामु पुर्‍याइरहेका छौं । यसले अरू बालबालिकालाई पनि उत्साही बनाइरहेको छ ।’
शनिबार के गर्छौ ? कतै घुमघाम । साथीभाइसँग भेटघाट । कि घरमै बसेर टीभी हर्ने ? घोराहीका साथी हरेक शनिबार सिर्जनशील बनाउँछन् । केही न केही सिर्जनशील काम गर्छन् । प्रत्येक शनिबार साथीहरू जम्मा हुन्छन् । कुनै विषयमा मन्तव्य दिन्छन् । त्यस विषयमा अरूले टिप्पणी र बहस गर्छन् । सुधार गर्नुपर्ने विषयमा सल्लाहसुझाव दिन्छन्, लिन्छन् । अर्को शनिबार कसले कुन विषयमा बोल्ने भनेर एक साताअघि नै निश्चित गरिन्छ । आफ्नो रुचिअनुसार प्राप्त विषयमा साताभरि तयारी गर्छन् । अनि गहकिलो र जानकारीमूलक मन्तव्य दिन्छन् । केही बेरको विषयगत छलफलपछि आआफ्नो रुचिका पुस्तक पढ्न थाल्छन् । घोराही उपमहानगरपालिका १४ स्थित सर्वोदय बाल क्लबमा आबद्ध भाइबहिनीले शनिबारलाई सिर्जनशील बनाउन ७ वर्षदेखि यस्तो अभ्यास गरिरहेका छन् । बालबालिकाका लागि छुट्टै पुस्तकालय पनि छ । उनीहरू पुस्तकालयमा आआफ्नो रुचिका पुस्तक पढ्छन् । जानेका विषयमा आपसमा छलफल पनि गर्छन् ।
सिर्जनशील क्षमता विकास गर्न क्लबका सबै निकै उत्साही हुन्छन् । ‘हरेक साता नयाँ विषयमा बोल्ने र लेख्ने अभ्यास गर्छौं । एकले प्रस्तुत गरेको विषयमा अरूले सल्लाहसुझाव दिने गर्छौं,’ क्लबकी सहसचिव लक्ष्मी श्रेष्ठले भनिन्, ‘यसले हामीलाई नयाँ विषयको जानकारी हुन्छ । लेख्ने र बोल्ने विषयमा तयारी गर्न सघाउँछ ।’ ५ कक्षामा अध्ययनरत श्रेष्ठ नियमित पाठयपुस्तकबाहेक विभिन्न विषयमा जानकारीसमेत लिइरहेकी छन् ।
यी बालबालिका विभिन्न विषयमा भएका प्रस्तुतिलाई रेकर्ड गरी रेडियोमा बजाउँछन् । साथी सदीक्षा शर्मा स्थानीय एफएम रेडियोमा ‘समता’ कार्यक्रम चलाउँछिन् । उनी बालबालिकाले प्रस्तुत गरेका विषयलाई रेडियोमार्फत सबैलाई सुनाउँछिन् । ‘साथीहरूले दु:ख गरी तयार पारेका प्रस्तुति अरूका लागि पनि उपयोगी हुन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले रेडियो कार्यक्रमबाट सबैसामु पुर्‍याइरहेका छौं । यसले अरू बालबालिकालाई पनि उत्साही बनाइरहेको छ ।’
नेतृत्व विकासका लागि पालैपालो नेतृत्व, माइन्युट लेखन र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको क्लबका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश नेपालीले बताए । ‘विभिन्न पदमा पालैपालो नेतृत्व गर्छौं । यसले विस्तारै सबैको नेतृत्व क्षमता विकास गर्छ,’ उनले भने, ‘हरेक बैठकमा फरकफरक सदस्यले माइन्युट लेख्छौं । यसबाट सबैको लेखन सीप विकास हुन्छ । हरेक कार्यक्रमका फरकफरक सञ्चालक हुन्छौं । यसले आत्मविश्वास वृद्धि गरेको छ ।’
क्लबले विभिन्न सामाजिक विकृति सुधारको सन्देशसहित सडक नाटक प्रदर्शन, सरसफाइ, वृक्षरोपणजस्ता कामहरू गर्दै आएको क्लबका सल्लाहकार नवीन श्रेष्ठले बताए । सामाजिक अभियानमा नेतृत्व गरेका कारण समाजमा बेग्लै पहिचान भएको उनले बताए । ‘कुनै नयाँ कामको सुरुवात गर्दा बाल क्लबलाई बोलाइन्छ । हाम्रो पनि सक्रिय सहभागिता हुन्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो क्षमताको उपयोग हुन पाएको छ ।
गाउँ समाजमा हाम्रो पहिचान पनि भएको छ ।’ २०६८ मा गठन भएको क्लबले हालसम्म विभिन्न रचनात्मक काम गरेर सबैलाई प्रभावित बनाएको स्थानीय टोल विकास समितिका अध्यक्ष नुमानन्द आचार्यले बताए । ‘सुरुमा सामान्य बैठक मात्रै बस्दै आएको क्लबले विस्तारै बालविवाह, बालश्रम, दुव्र्यसनजस्ता महत्त्वपूर्ण समस्याविरुद्ध चेतना जगाउने अभियान चलाउन थाल्यो,’ उनले भने, ‘यी अभियानले हाम्रो गाउँटोललाई गलत गतिविधिबाट टाढै राख्यो । समाज सुधारमा धेरै टेवा पुग्यो । हरेक बालबालिका क्लबमा आबद्ध हुने र विभिन्न जिम्मेवारी लिने क्रम चलिरहन्छ ।’
राप्ती अञ्चलकै पुरानो सर्वोदय पुस्तकालयभित्र उनीहरू आफ्ना हरेक गतिविधि गर्छन् । त्यसभित्र नै छुट्टै बाल पुस्तकालयको व्यवस्था छ । बालबालिका हरेक शनिबार पुस्तकालयमै समय बिताउँछन् । विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलाप र अध्ययन गर्ने उनीहरूको नियमित समयतालिका छ । बालबालिकाले प्रविधिमै अध्ययन गर्न पाउने गरी ई–लाइब्रेरी स्थापनाको तयारी गरेको पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सुशील गौतमले बताए । ‘बालबालिकालाई उपयोगी हुने धेरै पुस्तक राखिएको छ । निकै रुचिका साथ अध्ययन गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘समयअनुसार इमेल इन्टरनेटको आवश्यकता बढेकाले इन्टरनेटबाट चाहेका विषयवस्तु पढ्न सकिने गरी बालबालिकाका लागि छुट्टै प्रविधियुक्त पुस्तकालय व्यवस्था गर्दै छौं ।’
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:५६
काठमाडौँ — प्रभा तिमीले होमवर्क सक्यौ ?’‘तिमीले ?’‘तिमीले के गर्‍यौ, पैले तिमी भन न ।’ ‘मैले त छैन । ममी मामाघर गइस्यो । बाबाले जानिसिन्न । कसरी सक्नु नि होमवर्क ?’‘त्यसो होइन क्या, बाबालाई सोधन, जानिसिन्छ होला । मैले त सकें नि, बाबामामु दुवैले सिकाइस्या ।’ भदौको एक बिहान प्रभा र आभाले यसरी गफ गरे ।
गफ सकेपछि दुवै बालिका आ–आफ्ना घरभित्र गए । उनीहरू दुवै ओल्लोपल्लो घरका छिमेकी थिए । त्यसो त उनीहरू दुवैको पुख्र्यौली घर काठमाडांै होइन । फरकफरक ठाउँका उनीहरूका बुबाआमा काठमाडौं आएपछि छिमेकी बने । तर यी दुई बालिका भने काठमाडौंमै जन्मिएकाले जन्मँदादेखि नै छिमेकी बने । उनीहरूको उमेर मिल्दो थियो । स्कुल र पढ्ने कक्षा पनि एउटै थियो । अहिले उनीहरू पाँचमा पढ्थे । दुवै खुब मिल्थे पनि ।
उनीहरूको स्कुलमा नेपाली विषय गुरुआमाले पढाउनुहुन्थ्यो । उहाँ पुस्तकका पाठ पढाउनुका अतिरिक्त समय र सन्दर्भअनुसार चाड, पर्व, संस्कृति र संस्कारका बारेमा पनि कुरा गर्नुहुन्थ्यो । यति बेला पनि तीजले सहरलाई छोइसकेको थियो । हिजो गुरुआमाले उनीहरूको कक्षामा भन्नुभयो, ‘भोलि म तिमीहरूलाई तीजका बारेमा भन्छु । त्यो भन्दा पहिले यसपालि तिम्रो घरमा तीज कसरी मनाउने योजना छ भन्ने बारेमा आमाबुबालाई सोधेर लेखेर ल्याऊ है ।’ प्रभा र आभालाई आज यही काम सक्नु थियो ।
‘मैले हिजो दिएको काम सबैले पूरा गरेको छ है,’ भोलिपल्ट आफ्नो घण्टीमा गुरुआमा आएपछि भन्नुभयो । ‘गरेका छौँ गुरुआमा,’ यो विद्यार्थीेहरूको सामूूहिक आवाज थियो ।
‘ल, आफ्नो पालोमा आफूले लेखेर ल्याएको योजना सुनाउँदै जाने है,’ गुरुआमाले पालो लगाउनुभयो । विद्यार्थीले स्वीकार गरे ।
सुरुमा आभाको पालो पर्‍यो । उनले आफ्नो परिवारको तीजको योजना सुनाइन् । यसपालिको तीज उनको घरमै मनाउने रे । टोलका सबैसँग पालो मिलाउँदा उनीहरूको पालो छिट्टै परेको रहेछ । पोहोरपरारका कार्यक्रममा भेज खानेकुरा मात्र हुँदा धेरैले खल्लो मान्नुभयो रे । त्यसैले यो वर्ष खसी पनि काट्ने रे । आमाले त नयाँ गहना र लुगा किनिसक्नुभयो रे र उनका लागि पनि नयाँ लुगा ल्यादिइसक्नुभएको छ रे ।
आभापछि करिस्माको पालो आयो । उनले पनि आफ्नो घरको तीजको कार्यक्रमको योजना सुनाइन् । यस वर्ष उनीहरूको घरबाट ‘ग्रान्ड पार्टी’ दिने पालो रहेछ । टोल छिमेकका सबैले आफ्नो पालोमा पार्टी दिँदा रहेछन् । पालोको अन्तिममा अलि विशेष कार्यक्रमसहित पार्टी प्यालेसमा ककटेल डिनरको आयोजना गरिँदो रहेछ । यसलाई उनीहरू ‘ग्रान्ड पार्टी’ भन्दा रहेछन् र यस वर्ष यसको पालो करिस्माको परिवारको रहेछ । उनीहरूको पालो तीजको व्रतभन्दा केही पछाडि परेको भए तापनि उनीहरूले पैसाको बन्दोबस्त र पार्टी प्यालेस फिक्स गरिसकेका रहेछन् ।
यसैगरी सबैले आआफ्नो घरको योजना सुनाए । प्रभाको पालो आएपछि गुरुआमाले उनलाई सोध्नुभयो । उनले होमवर्क गरेकी थिइनन् । उनले भनिन्, ‘मामु घरमा आइसेन । उहाँ आइसेपछि सोधेर भोलि हेमवर्क बुझाउँछु ।’
हरिमायाको पालो अन्तिममा आयो । उनले सबै साथीका भव्य र महँगा तीज कार्यक्रमका योजना सुनिसकेकी थिइन् । त्यसैले होमवर्क भन्न गाह्रो मानिन् । महँगो स्कुल पढ्ने भए तापनि उनी सम्पन्न परिवारकी थिइनन् । उनका बाआमा सहरमा मजदुरी काम गर्नुहुन्थ्यो । पढाइ राम्रो भएको र बुबाले धेरैपल्ट अनुरोध गरेपछि उनले त्यहाँ छात्रवृत्तिमा पढ्न पाएकी थिइन् । गुरुआमाले कर गरेपछि रातोपिरो मुख पार्दै उनले होमवर्क पढिन् । ‘यसपालि हाम्रो घरको तीजको कार्यक्रम करिब सधैंजस्तै हुने छ । दुई दिन बाबा काममा जानुहुन्न । दर खाने अघिल्लो दिन बुबा फुपूलाई लिन जानुहुन्छ । आमालाई त्यति सन्चो छैन । यसपालि उहाँ मावल जानुहुन्न । व्रत बस्ने अघिल्लो रात आमाले दर पकाउनु हुन्छ । करेलाको पक्कुसँग दर खान खुब मीठो हुन्छ । राति उठेर सबै जना दर खान्छौँ । कमजोर स्वास्थ्यको कुरालाई ख्याल गरेर बुबाले आमालाई यस वर्ष खाली पेट नबस्न भन्नुभएको छ । तर आमाले दिनभर व्रत बस्न सकिनँ भने पनि सकेजति समयचाहिँ बस्छु भन्नुभएको छ । पूजाका लागि गुरुलाई पनि छिट्टै डाक्नुभएको छ । पूजा सकिएपछि आमा र फुपूले फलफूल, दूध खानुहुन्छ होला ।’
यसपछि तीजबारे गुरुआमाले बोल्नुभयो । उहाँले हरिमाया र उनको परिवारलाई स्याबासी दिनुभयो । कक्षाका साथीहरू ‘पक्कु’ र ‘दर’ कस्तो हुने रहेछ भनेर छक्क परिरहेका थिए । गुुरुआमाले तीजको परम्परा, महत्त्व र संस्कृतिका बारेमा भन्नुभयो । हाम्रा चाडपर्वलाई देखासिकीको तथा भड्किलो बनाउनु नहुने र हरिमायाको परिवारले जस्तै साधारण बनाएर मान्नुपर्ने कुरा गर्नुभयो । कक्षाको समय सकिन लाग्दा आभा, प्रभा र करिस्मा घरैमा ‘पक्कु’ र ‘दर’ पकाइमागेर खाने सल्लाह गर्दै थिए ।
प्रकाशित : भाद्र २४, २०७५ ०८:५२
एसी मिलान जुनियर क्याम्प